Izibhotshi ze-Ankle zizicathulo zeentombi ezihle. Ngeenyawo zobuhle ziphinde zavela kungekudala. Kodwa yintoni kanye abafazi abasemgangathweni nabasemgangathweni abakwaziyo ukuthetha ngokucacileyo ukuba izibhotshi zesikhumba. Kodwa akukho nto inzima. Izibhotshi ze-Ankle zifana nezicathulo eziphathekayo, nto yinto ephakathi phakathi kwezicathulo eziqhelekileyo kunye neziqhekeza eziqhelekileyo. NgesiNgesi, lezi zihlangu zibizwa ngokuba "izicathulo ze-ankle" okanye "izibhotshi zeenqindi", ezithetha izicathulo okanye izicathulo ezinqeni. Ziziphi iimpahla ezithengisa kakhulu, ozifunda ngokufunda le nqaku.
Inomdla ukuyenza yimilo yesithende. Inyaniso kukuba izithende ze-ankle zingaba naluphi na uhlobo. Yonke into incike kwiingcamango zomyili. Kukho imodeli enesithende ngesimo se-iceberg okanye nokuba ibhotile. Kukho iibhotshi ngokubanzi ngaphandle kwesithende okanye kwi-wedge.
Oko sikufumene izibhotshi zesikhumba. Ngoku uhlala uqiqa ukuba kutheni bethandwa kangaka. Kwaye konke malunga neyunivesithi. Bahlala ngokugqibeleleyo emlenzeni kwaye babukeka bevela phezulu. Izibhotshi ze-Ankle zingakhethwa kunaliphi na ixesha kunye nayiphi na imozulu. Ebusika okanye ehlotyeni, ngokuhamba ngeepuddles okanye phezu kwe-asphalt eshushu. Ezi zihlangu zigqibelele ukugqoka kwindlobongqongqelo yokuhlwa kunye neseshishini esinyanisekileyo. Nangona isithende se-botillion sisinde, kodwa sizinzile. Nangona inzwane iyancipha, kodwa unyawo lukhululekile. Naluphi na umlenze, i-suede okanye isikhumba, nayiphi na imibala. Yilokho i-botilions.
Ezi zicathulo, njengento engekho, zigxininisa ubuhle bemilenze yamantombazana enhle. Ngokukodwa xa uzigqoka phantsi kweear okanye zifutshane. Okanye nangomkhonto wecenim. I-Botillon ilula kakhulu kunezibhatshi zasebusika zendalo, ngoko ke oku kukhetho lwabasetyhini bezoshishino abanenhlanhla kwimoto yabo.
Xa kuthengiswa ziintlobo ezininzi ezahlukeneyo zeebhotile zamaqhosha. Bright busika ehlobo, obomvu okanye obomvu. Izicathulo zaseBotiot zivame ukuba zenziwe ngeempumlo evulekile kwaye zingenasithende. Kwikwindla ungakhetha imodeli ngoku i-rubber okanye i-suede okanye isikhumba. Unomdla kakhulu. Incinci kwaye ikhetha ngokugqithiseleyo ibhuthi ezigqithiseleyo kwisithende esiphezulu. Imibala eyahlukileyo - eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza okwesibhakabhaka, ephuzi, okanye ebomvu, emnyama, e-beige. Kukho imodeli kwi-wedge, okanye ngaphandle kwesithende esiphezulu. Ukuhlobisa izibhokhwe zeenqaqa kunye neentsimbi, kunye nokubopha, kunye neetyunithi zefestile, kunye nobuqili bokuqhawula phambili okanye emva. Kwinqanaba lokuthandwa, iibhola zebhokisi kwisitayela se-thirties yenkulungwane yokugqibela, njengokungathi ivela kumaphepha omagazini omdala.
Kodwa ezi bhotile nazo zinomlinganiselo omnye. Ngelishwa, abafazi abanamaqabunga amakhulu abanako ukubanako. Iibhothi ze-ankle zichasene-kuboniswe kubafazi abanobunzima obubi. Musa ukumbathisa lesi sihlangu ngeebhuleki okanye ingubo ephantsi kakhulu kunokuba idolo.
Kodwa ukugxotha ubuhle, ungalibali ngokukhupha kwakho. Izikhwele kufuneka zilungele. Qinisekisa ukuba ukhululekile kwaye isithende asiphazamisi. Hamba ujikeleze, jonga ukuzinza kwabo.
Enye yeenzuzo zebhotilion ukukhanya kwabo, ukuzinza. Le shoe ayiyi kulayitha iinyawo zakho ngokungathi, umzekelo, iibhuthi eziphezulu. I-Botillons ifanelana nesitayela se-ofisi yokugqoka, igxininisa ubufazi benkosikazi yabo. Ukukhusela ngokugqibeleleyo kwi-humidity, slush. Ezi zihlangu zinyameko ziya kunceda ukhangele namhlanje.
Iibhokotshi ze-Ankle zigqutywa ngabasetyhini banoma yiphi iminyaka. Oku kubaluleke kakhulu. Abanye abantu asebekhulile abaqhipanga ukuthenga izicathulo zefashini, ukuze bangajongi. Ezi bhotile zizalisekisa nayiphi na indlela yokugqoka, ngaphandle kokuphuma emfanekisweni. Ngethuba elifanayo, banokudibaniswa nazo naziphi na izesekeli. Iibhotile zizobudala kunye nexesha elifanayo.
Iibhotile zixela ubomi obude. Iibhothi ezinamafestile ezinamafestile ezintle zihamba kakuhle kwaye zihle. Ngako ngesibindi uthenge iindidi ebusika, ekwindla nakwihlobo. Kwaye ujabulele ubuhle, induduzo nokuzinza.
"Hamba ngeenyawo!" Okanye ziziphi izicathulo zokugqoka entwasahlobo ka-2015. Iifoto zezicathulo ezinokufashisa
Ukugcinwa kakuhle kwezicathulo zesikhumba
Isibindi sesilwanyana kwisitayela se-barbecue
Chowder nge crayfish
Ukuzivocavoca ukuvuselela lula umzimba